Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Guam dia nahatratra ny taona kalandrie tsara indrindra niaraka tamin'ny mpitsidika 1.55M nankasitrahana tamin'ny taona 2018
Faly ny Birao Mpitsidika ao Guam (GVB) fa nanatrika mpitsidika 1.55 tapitrisa i Guam tamin'ny taona 2018, Taom-pifanarahana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny nosy.
Ny volana desambra 2018 dia namarana ny taona matanjaka tamin'ny fandraisana ireo mpitsidika 146,104 any amoron'ny nosy. Maneho fitomboana 3.7% izany tamin'ny taon-dasa, ka nahatonga ny Desambra 2018 ho volana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny fizahantany nosintsika tamin'ny alàlan'ny fandresena ny rakitsoratra teo aloha nisy mpitsidika 145,817 izay napetraka tamin'ny Aogositra 2018.
Ity fitomboan'ny fahatongavana ity dia mifandraika mivantana amin'ny fiakarana ankapobeny amin'ny seza misy an'i Guam. Manodidina ny 982 ny sidina ho an'ny volana desambra 2018 misy toerana 197,228, fiakarana 5.68% raha ampitahaina amin'ny seza 186,634 notaterina tamin'ny desambra 2017.
"Miarahaba ny tsirairay amin'ny indostrian'ny fizahantany izahay noho ny fanosehana ny taona 2018 tamin'ny vokatra mahafinaritra sy fandraisana ireo mpitsidika 1.55 tapitrisa any amin'ny paradisa nosintsika," hoy ny filoham-pirenena sy ny CEO GVB, Nathan Denight. “Betsaka ny zavatra tsy andrasantsika amin'ity taona vaovao ity rehefa mihabe sy miovaova amin'ny tsenan'ny loharanom-baovao isika, mizara ny kolontsaina Chamoru ary miasa hiarahaba ireo mpitsidika 1.6 tapitrisa amin'ny taona 2019.”
Mitohy ihany koa ny fanarenana ny tsenan'i Japana, izay nitsambikina 27.24% ny fahatongavan'i Japon tamin'ny Desambra 2018 raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taona lasa. Ny fahatongavan'i Korea nandritra ny volana dia nihena 8.9% noho ny fihenan'ny seza misy mpitatitra fiaramanidina toy ny Korean Air sy Jeju Air. Na izany aza, ny fahatongavan'ireo tonga hatramin'ny taona ho an'i Korea dia mbola naneho fitomboana matanjaka izay nifarana tamin'ny taona + 9% vs. 2017.
Ny tsena hafa izay naneho ny fitomboany tamin'ny volana desambra dia misy an'i Taiwan 6.8%, Etazonia 6.8%, Hong Kong 17.1%, ary ny Federasiona Russia 25.3%.
Ny fahombiazan'ny programa fandrisihana ny zotram-piaramanidina avy amin'ny GVB sy ny Guam International Airport Authority (GIAA) dia manohy mitaona toerana maro kokoa ho an'i Guam. Tamin'ny volana Desambra, United nanampy sidina efatra fanampiny isan-kerinandro eo anelanelan'i Guam sy Nagoya. T'way koa dia nanomboka ny serivisy Nagoya-Guam ny 29 Desambra ary hitohy hatramin'ny Oktobra 2019. Seza maherin'ny 130,000 amin'ny sidina 700 charter no kasaina hatao amin'ny Taom-baovao Kalandrie 2019.
Desambra 2018 Famintinana ny fahatongavana mialoha (Tsindrio)